OEM mechie ọnụ ụdị soplaya na ndị nrụpụta | Jiwei
Ⅰ. Silenced Type hydraulic breaker Okwu Mmalite
HMB igbe-ịgbachi nkịtị ụdị haịdrọlik emebi na-họọrọ maka ala olu na gburugburu ebe obibi-echebe.
Idebe ihe ohuru aburula mgbe mbu nke YanTai JiWei Construction Machinery Equipment Co., Ltd .. Anyị na-eji ihe ọmụma anyị na ebumnuche anyị iji nye igbe dị jụụ-ịgbanyụ haịdrọlik haịdrọlik hama maka excavator nke na-aga n'ihu ụlọ ọrụ. Anyị bụ ndị a pụrụ ịdabere na emeputa. Ndị ahịa anyị zuru ụwa ọnụ amatala ụdị mma anyị na arụmọrụ dị elu n'ichepụta mgbakwunye hydraulic.
Kedu ihe bụ HMB igbe haịdrọlik ihe mmebi foriri?
1.Low mkpọtụ larịị
2.Flọ na-emechi emechi iji chebe isi ahụ
1. China si n'elu excavator ịwụ emeputa, anyị nwere anyị factory na afọ 12 nke mmepụta ahụmahụ.
3. E nwere otu QC raara onwe ya nye, àgwà na-agbaso ụkpụrụ zuru ụwa ọnụ, ma gafere OA asambodo.
4. Ngwaahịa nwere akwụkwọ ikike nke otu afọ, na-enye ọrụ nduzi na ntanetị na ntanetị, yana otu ndị na-azụ ahịa ahịa ọkachamara.
5. Nkwado OEM / ahaziri ọrụ.
7. ogologo oge na-eji ndụ na ike power.Korean technology.
Idobe ihe ohuru aburula mgbe mbu nke YanTai JiWei Construction Machinery Equipment Co., Ltd .. Mgbakwunye siri ike na ịdị mma! Emepụtara site na ihe ndị kachasị mma, ọnụahịa haịdrọlik na-abịa na-enweghị atụ ma na-adịgide adịgide. na-agbaso ụkpụrụ kachasị sie ike na ụlọ ọrụ ahụ. Ngwaahịa anyị agaghị ahapụ gị maka usoro arụmọrụ na njigide.
Ọ bụrụ na ị nwere mkpa ọ bụla, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla biko.
Nke gara aga: ụdị ụdị
Osote: Top ụdị